एन्जिला तुम्बापो सुब्बा - Khelpati Khelpati - Digital Khel Patrika
एन्जिला तुम्बापो सुब्बा फुटबल खेलाडी
पुरा पढ्नुहोस Weight 58 kg Height 5.4 ft Major Awards Birthday May 1996
नाम : एन्जिला तुम्बापो सुब्बा
जन्म : २०५३–०२–१५
आमा : राधिका राई
उचाई : ५.४
तौल : ५८
काठमाडौं । खेलकुदमा प्राय कथा हार र जितका हुन्छन् । बाँकी रहेका अभाव र दुखले भरिन्छन् । केही कथा यस्ता हुन्छन्, जो देखिदैनन्, कतै लेखिदैनन् ।
यो कथा एउटा सफल फुटबलरको हो, अनि उसको बेदनाको ।
जो निरन्तर डटिरहिन्, खटिरहिन् आफ्नो कर्मसंग । अनि लखेटिईन् जिन्दगीका केही थान प्रश्नसंग ।
यो कथा महिला राष्ट्रिय टिमकी नम्बर एक गोलरक्षक एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको हो । उनीसंग जोडिएको फुटबलको संघर्ष र सफलताको हो ।
अनि उनको बेदना र भावनाको पनि हो, जुन कुरा मनको कुनै कुनामा उनले गाँठो पारेर राखेकी थिईन्, कसैले नदेख्ने गरि, कसैले नसुन्ने गरि ।
कथाको सुरुवात उनको बाल्यकालबाटै गरौ, अझ त्यो भन्दा अगाडीबाट ।
पाँचथर घर भएका एन्जिलाका बुवा फौजी थिए, उनी आर्मीमा जागिर गर्थे । डुलिहिड्ने फौजीको नियतिले उनलाई जिल्लाकै विकट क्षेत्र फाक्तेब पुर्रायो । जहाँ उनको भेट एन्जिलाको आमासंग भएको थियो । दुवै जना छोटो समयमा एक अर्काको प्रेममा परे । दुवैले भागी बिवाह गरे ।
दिन बित्दै गए, रात कट्दै गए । दोस्रो सन्तानको रुपमा एन्जिलाको जन्म त्यही फाक्तेबमा भयो । लगत्तै उनका बुवाले फौजीको जागिर छाडिदिए र ईलाम झर्ने निर्णय लिए ।
दिन सजिलै कटिरहेका थिए, ईलाम हुँदै उनीहरु झापासम्म झरे । बुवाले ठेकेदारी काम सुरु गरेका थिए । एन्जिला चार बर्षकी थिईन्, बुवा एक्कासी घर छाडेर निस्किए । कहिल्यै नफर्किने गरि ।
दिन बित्यो, महिना बिते, बर्षौ बित्यो तर अह उनी फर्किएर आएनन् ।
उनले आमालाई नसोधेकी होईनन् तर चित्त बुझ्दो जवाफ कहिल्यै पाईनन् ।
उनले कतै सुनिन्, बुवाले अन्तै घरजम गरे ।
सम्झदा सुरु सुरुमा उनलाई नरमाईलो लाग्थ्यो ।
‘बुवाको कुरा गर्दा अब त्यस्तो केही हुन्न, पचिसक्यो ।’ कुराकानीको सुरुवातमा उनले निर्दोष हाँसो फुस्काईन ।
बुवाले छाडेपछि परिवारमा दुखका दिन सुरु भए । उनी ४ बर्षकी थिईन्, उनका दाजु पनि सानै थिए । सबैभन्दा कष्ट आमाले ब्यहोर्नु पर्यो । दुई सन्तान हुर्काउने जिम्मेवारी अब आमाको काँधमा आईपर्यो । आमाले हार मानिनन्, नियतिसंग भिड्ने निर्णय लिईन् । साना लालाबाला हुर्काउन उनले अर्काको बारी गोड्ने देखि घर गोठसम्मको काम गर्न थालिन् ।
तर परिवारलाई समस्या र अभावले गाँज्न छाडेन । हुर्किन लागेका छोरा छोरी पढाउन समस्या उस्तै थिए । घरको मुल खम्बा हराएपछि, छाना कमजोर हुने रैछ ।
केही समयपछि एन्जिलाको आमाले अर्को बिहे गरिन् ।
दिनहरु अब सहज हुन थाले ।
गाउँका दुख र समस्या त उस्तै उस्तै हुन् तर जिन्दगीमा एन्जिलाले आधार भेटिन् । कान्छो बुवाले उनलाई छोरीको माया दिए, जिन्दगी बाँच्ने आधार दिए । जन्म दिनेले छाडेर गएर के भो त उनले कर्मको रेखा कोरिदिए ।
एन्जिलाको फुटबल यात्रा नयाँ परिवारपछि सुरु भएको हो ।
नयाँ घरमा उनकी दिदी मनिता फुटबल खेल्थिन् । दाई मिलन पनि फुटबलमा अभ्यस्त थिए । एन्जिलाले पनि दाई र दिदीको पछाडी लागेर फुटबल हान्न सिकिन् ।
सानी एन्जिलालाई दाई र दिदीहरु फुटबलमा आएको देखेर हकार्थे । तर उनी डेग चलिनन् ।
कुनैपनि अवस्थामा उनी खेल्न तयार हुन्थिन् । पोजिसन भन्ने भएन, जे भेट्यो त्यही खेल्ने गर्थिन् ।
सुरु सुरुमा उनी डिफेन्समा खेल्थिन्, मिडफिल्डमा नि देखिन्थिन् । गोल हान्न अगाडीबाट नि खेल्थिन् ।
पाँचथरमै एउटा महिला प्रतियोगिता हुने भयो । पान्दमको टिमबाट उनी खेल्न जाने भईन् । उनीलाई फरवार्ड खेल्ने भनेर टिममा राखिएको थियो, मैदान उत्रदाँ गोलकिपरको पोस्ट समाल्नुपर्ने भयो । मन नलागी नलागी किपर बसिन् । तर उनले गोलकिपरमा राम्रो खेल देखाईन् । उनको टिमले सो प्रतियोगिता जित्न पुग्यो । दाईहरु आएर भन्ने थाले, ‘राम्रो खेल्यौ, अब किपरबाट खेल्न थाल, पछि राम्रो हुन्छ ।’
त्यहीबाट हो उनको गोलकिपरको पोजिसन निश्चित भएको ।
एन्जिलाले १३ बर्षको उमेरमा फुटबल खेल्न सुरु गरिन् । स्कुलका दिनहरु फुटबल खेल्दै बिते । धेरै मोजाका बलहरु फाँटे । एक समय भिरमा बल लिन जादाँ उनले खुट्टा भाँचेकी थिईन् ।
दिमागमा धेरै थिएन, मात्र खेल्न पर्छ भन्ने थियो । जे अगाडी देख्यो गुडाएर हानिहाल्ने स्वभाव थियो । राष्ट्रिय खेलाडी हुने, मान सम्मान कमाउने भन्ने चेत थिएन ।
एन्जिलाले च्यातिएको जर्सी र मोजाका बलमा बाल्यकालमा फुटबल खेल्ने शोख पुरा गरिन् ।
विस्तारै विद्यालय र जिल्लामा फुटबल गतिविधि बढ्न थाले । स्कुलमा खाजाको समय फुटबल खेलेर बित्न थाल्यो । फुटबलको टोलीमा उनीसंग केही सिमित केटी साथी हुन्थे, धेरै जसो केटा साथीसंग उनी खेल्ने गर्थिन् ।
एन्जिला जब्बर तरिकाले खेल्थिन्, उनको फुटबल मोह देखेर सिनियर सबै छक्क पर्थे ।
स्कुल पढ्दै गर्दा हो, उनको पान्दम टिमलाई जिल्ला छनोट खेल्न बोलाएको थियो । उनलाई किपरमा राखिएको थियो । किपर बस्न उनलाई खासै टेस परेको थिएन तर उनीसंग विकल्प थिएन ।
उनको खेल राम्रो थियो । फुटबल खेल्ने क्रममा उनको भेट दर्शन गुरुसंग भयो । दर्शन एन्जिलाको पहिलो गुरु बने । उनले एन्जिलाको खेललाई माझ्ने काम गरे । गोलकिपरको प्राविधिक ज्ञान दिए ।
एन्जिलाले जिल्ला छनोट खेल्ने मौका पाईन् । विराटनगरमा भएको जिल्ला छनोटमा उनको टोली पहिलो बन्यो । ६९ सालमा उनी पुर्वाञ्चलको टोलीमा किपरमा छनोट भईन् । पुर्वाञ्चलले राष्ट्रिय खेलकुदका लागि टिमको तयारी गरिरहेको थियो । पुर्वाञ्चलबाट पहिलो रोजाईको गोलकिपरले परिक्षाको कारण देखाउँदै टिमबाट बिदा लिईन् । त्यो अवसर एन्जिलाले प्राप्त गरिन् ।
धनगढीमा भएको छैटौ राष्ट्रिय खेलकुदमा उनले राम्रो प्रर्दशन गरिन् । उनको टोली चौथो बन्यो । अन्य विकाश क्षेत्रका टोली धेरै गोल खाएर थलिएका थिए । तर एन्जिलाले विभागीय टिमको बर्चस्व हुने प्रतियोगितामा शानदान खेल प्रर्दशन गरिन् । उनको प्रर्दशनमा धेरै विभागीय टिमले आखाँ लगाए । एपीएफका टिम व्यवस्थापक प्रेम श्रेष्ठले एन्जिलालाई क्लबमा राख्न तयार देखिए । उनैले एन्जिलालाई काठमाडौं ल्याउने चाजोपाजो मिलाए ।
त्यसपछि एन्जिलाले जिन्दगीलाई पछाडी फर्किएर हेर्न परेन ।
प्रेम एन्जिलाको टिम व्यवस्थापक मात्र बनेनन्, जीवनको पथ प्रदर्शक समेत बने । फुटबलमात्र सिकाएनन्, जिवन बुझाए । हौसला दिए, प्रेरणा भरे । दुर्गम क्षेत्रकी एक प्रतिभालाई काठमाडौंमा लगेर फक्रन र फैलन मद्दत गरे ।
‘उँहाले पनि धेरै समर्थन गर्नुभयो । उहाँले नै एपीएफसम्म लिएर आउनुभयो । पढाउने देखि होस्टेल राख्ने काम उहाँलेनै गर्नुभयो । उहाँलाई गडफादर मान्छु । जे होस, उहाँले बुवाको अभाव हुन दिनुभएको छैन ।’ एन्जिला खुल्छिन् ।
एपीएफमा आउदाँ उनीसंग नरबहादुर राई पनि जोडिए, अनि आएर चन्दन दाई । उनै चन्दन दाईले रात दिन नभनी उनलाई गोलकिपिङ सिकाए । प्राविधिक ज्ञान खासै नभएकी एन्जिलाले क्लबमै आएर माझिन पाईन् । उनले एपीएफले मैदानमा धेरै पसिना चुहाईन् ।
सोही बर्ष हेटौडामा एनसेल कप सञ्चालन भयो । टिमले जित्यो, तर एन्जिलाले खेल्न पाईनन् । लगातार दुई बर्ष संघर्षमै बित्यो । क्लबमा सिनियर चन्द्रादेवी दाहाल थिईन् । उनी राष्ट्रिय टिमको समेत पहिलो रोजाईको गोलकिपर थिईन् । एन्जिलाको टक्कर उनै चन्द्रासंग पर्ने गर्दथ्यो ।
लगत्तै उनले एएफसी साफ यु–१४ खेलिन् । त्यो प्रतियोगिता नेपालले जित्यो । उनले श्रीलंकासंग गोल नखाई, भारतको पेनाल्टी रोकेकी थिईन् । सोही प्रर्दशनले उनी सिनियर टिममा परिन् । पाकिस्तानमा भएको साफको सिनियर टोलीको उनको समेत नाम थियो ।
त्यसपछि धनगढीमा महिला लिग भयो । एपीएफ दोस्रो भयो । लगत्तै उनले दोस्रो खेल एनसेल कप खेलिन् ।
करियरले गति लिदै थियो । उनी भारतको सिलुगडीमा भएको साग टिममा परिन् । प्रतियोगिता अगाडी उनको प्रर्दशन बिग्रिएको थियो । उनी फेरी दोस्रो रोजाईमा बस्न पर्ने अवस्था बनेको थियो । तर उनले त्यही प्रतियोगितामा डेब्युको मौका पाईन् । श्रीलंकाविरुद्वको खेलमा पहिलो रोजाईबाट खेल्दै उनले राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यु गरिन् । त्यसपछि उनी लगातार नेपालको महिला राष्ट्रिय टिमको नम्बर एक गोलकिपर रहदै आएकी छिन् ।
एन्जिलालाई लाग्छ, फुटबलले उनलाई नयाँ जिवन दिएका छ । ईज्जत दिएको छ, सम्मान दिएको छ, सबै भन्दा ठुलो नाम दिएको छ । अभाव र संघर्षले कमाएको नाममा उनलाई आज गर्व छ ।
तर भोली के त ?
उनलाई भविष्य सम्झिएर डर लाग्छ । फुटबल करियर पछाडीको जिन्दगीले उनलाई पिरोल्छ ।
‘अहिले सबैले राम्रो भन्छ । राष्ट्रको गहना हो भन्छ । खेल, उमेर र प्रर्दशन सधै उही रहदैन् । खेलाडी हुदाँको जस्तो जिन्दगी करियर सकिएपछि पाईदैन भन्ने चिन्ता लाग्छ । भविष्यको पिर लाग्छ ।’ उनको अनुहारको रंग बिस्तारै हराउन थाल्छ ।
पढाई राम्रो भएमा विभागमा करियर खोज्ने योजना छ । नभए बाहिर जानुको विकल्प नहुने उनी आँकलन गर्छिन् । बिस्तारै बाहिरी देश जाने तयारी गर्ने उनको योजना छ ।
‘विभागमै भए राम्रो हुन्थ्यो । नत्र विदेश नै जाने । अरु उपाय नि छैन । पैसा नि कमाउन पर्यो नि ।’ पैतला हेर्दै एन्जिला थोरै लगाउँछिन् ।
तर,उनलाई रहर छ, नयाँ पुस्ताका खेलाडीलाई फुटबल सिकाउने । गोलकिपरको ट्रेनिङ गरेर नेपालमै केही गर्ने सोच छ । फुटबलको रुप बदलिए देश बस्ने नभए बिदेश उड्ने उनको योजना अटल छ ।
‘महिला फुटबलका आफ्नै दुख छ ।’ उनी सुनाउछिन्, ‘यति धेरै बर्ष फुटबल खेलेर बाहिर जानु बाध्यता हो । एक त प्रतियोगिता हुदैन, आम्दानी पनि गतिलो छैन । ईज्जतमात्र भएर नहुने रैछ, पैसापनि चाहिन्छ । राष्ट्रिय टिमको खेलाडीले कम्तिमा राम्रो जिवन जिउने सपना हुन्छ । शहर महङ्गो छ । विभागको तलब थोरै हुन्छ । पैसाको अभाव धेरै छ, कहिले काँही पैसा नभई हिड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’
जे होस, एन्जिलालाई देशका लागि खेलेर पाएको ईज्जतले ठुलो खुसी दिएको छ । देशको गोलपोस्ट समाल्न पाउँदा गर्वले छाति चौडा हुन्छ । कहिले काही लाग्छ, जिवनमा सोचेको भन्दा धेरै नै पाए ।
तर कहिले काँही मन अनायासै खिन्न बन्छ । जन्म दिने बाबुको यादले सताउँछ । पाएको सफलता बुवालाई देखाउन रहर लाग्छ । रात जब ढल्किदै जान्छ, आखाँहरु यत्तिकै रुझ्ने गर्छन, सिरानीहरु भिज्ने गर्छन् ।
उनको मानसपटलमा बुवाको तस्विर याद छैन, उनलाई बुवाप्रति कुनै गुनासो छैन । तर यत्ति सोध्न मन छ, तपाई मलाई छाडेर किन जानु भयो ? के तपाई पनि मैले जस्तै कहिले काँही याद गर्नुहुन्छ ?
अन्जना राना मगर फुटबल खेलाडी
उषा भण्डारी भलिबल खेलाडी
मिक्छेन तामाङ फुटबलर